ဂျပန်လူမျိုးများ၏ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြပုံ ၁၀ မျိုး !!! - JAPO Japanese News
ဂျပန်လူမျိုးများ၏ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြပုံ ၁၀ မျိုး !!!
ဟူး 06 Jan 2021, 16:36 ညနေ
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ အလုပ်ကိုအလွန်ကျွံလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် New Year ပိတ်ရက်တွေမှာတော့ ပိတ်ရက်ရှည်နဲ့ကောင်းကောင်းအနားယူကြပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ New Year ပါတီယဥ်ကျေးမှုနဲ့မတူဘဲ၊ ဂျပန်မှာတော့ ဒီလိုကာလဟာမိသားစုနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ ဈေးဆိုင်တွေပါအဝင်၊ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဆေးခန်းတွေပါ ရက်အနည်းငယ်ကြာ ပိတ်ထားတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုအများစုပိတ်ထားတတ်တဲ့အထဲမှာ သင်ဟာအံ့သြစရာကောင်းစွာ ဂျပန်လူမျိုးတို့ရဲ့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပုံကို Instagram မှာ ရိုးရာအလှတန်ဆာဆင်ယင်ထားတဲ့ပုံများ၊ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အစားအစာများနဲ့ ထူးခြားတဲ့ယဥ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခမ်းအနားပုံတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးများ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြပုံ ၁၀ မျိုးကတော့..
၁။ Kohaku Uta Gassen သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ
New Year ပိတ်ရက်အတွင်းမှာ ဂျပန်လူမျိုးအများစုဟာ မိသားစုတွေတွေ့ဆုံပြီး အတူတူတီဗွီကြည့်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုအချိန် NHK ဂျပန်ရုပ်သံကနေနှစ်စဥ်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ Kohaku Uta Gassen လို့ခေါ်တဲ့ သီချင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်။ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ရေပန်းအစားဆုံးဂီတအနုပညာရှင်တွေ မိန်းကလေးနှင့် ယောက်ျားလေး ၂ ဖွဲ့ခွဲကာ ယှဥ်ပြိုင်ကြတဲ့သီချင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ New Year’s Eve အနေဖြင့်ကျင်းပကြပါတယ်။
၂။ New Year Ekiden တာဝေးအပြေးပြိုင်ပွဲကြည့်ခြင်း
New Year Ekiden ဆိုတာကတော့ New Year ကိုရောက်လာတိုင်း နှစ်စဥ်ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေဟာ တိုကျိုကနေ Hakone မြို့အထိအပြေးပြိုင်ကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ ဂျပန်ရဲ့တီဗွီအစီအစဥ်မှာ အကြီးဆုံးမာရသွန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါးကလည်းကြည့်ရှုကြပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်ကတော့ ၁ ရက်နေ့မှာပဲ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
၃။ Osechi ဟင်းလျာစားခြင်း
နှစ်သစ်အစမှာဆို ဂျပန်လူမျိုးတွေ Osechi ryori ကိုစားကြတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့သိပြီးလောက်မှာပါ။
၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် လေးထောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ယွန်းထည် box ထဲမှာထည့်ပြီး ဂျပန်ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးအစားအစာအဖြစ် တန်ဖိုးထားစားသုံးကြပါတယ်။ Osechi ryori ကဈေးအလွန်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အချို့သောမိသားစုတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားကြပါတယ်။
Osechi ryori မှာပါဝင်တာတွေကတော့ zoni လို့ခေါ်တဲ့ mochi ဆန်ဟင်းချိုနှင့်၊ အနီရောင် အဖြူရောင်အသီးအနှံတွေအပြင်၊ ပင်လယ်ရေမှော်နဲ့ အမည်းရောင်မြေပဲတစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။
၄။ Oshiruko အချိုပွဲ
Oshiruko ဆိုတာကတော့ azuki beans ကိုပြဲသွားတဲ့အထိ ချိုချိုလေးပြုတ်ပြီး mochi နဲ့တွဲစားရတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Soba ခေါက်ဆွဲအတူစားကြခြင်း
New Year’s Eve မှာတော့ မိသားစု ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ရိုးရာplain ခေါက်ဆွဲဖြစ်တဲ့ Toshikoshi soba ကိုစားကြပါတယ်။ Toshikoshi soba ကိုတော့ (year-crossing noodle) လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။
ဒီအကြံဉာဏ်ကိုတော့ “ နှစ်တစ်နှစ်ကနေနောက်တစ်နှစ်ကိုကူးပြောင်းခြင်း” ဆိုတဲ့စကားကနေ ကောက်နုတ်လိုက်ပြီး year-crossing noodle လို့ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၆။ နတ်ကွန်းတွင် သွားရောက်ဆုတောင်းခြင်း
ဂျပန်မှာ New Year ကိုရောက်လာတိုင်း လူတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေထဲက အကျော်ကြားဆုံးကတော့ နတ်ကွန်းဆီသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးနှင့် စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ကံကောင်းစေရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း ဆုတောင်းကြပါတယ်။
လည်ပတ်သူအများဆုံးကတော့ တိုကျိုရဲ့ Meiji Jingu နတ်ကွန်းနဲ့ ကျိုတိုမှာရှိတဲ့ Fushimi Inari Taisha နတ်ကွန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်ဟာ လူတွေများတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ မြို့ကြီးတွေမှာမဟုတ်ဘဲ local မှာရှိတဲ့နတ်ကွန်းတွေဆီသွားဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ နှစ်သစ်ကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကြီးအခါကြီးတွေမှာဆို လူတန်းကြီးကိုနာရီပေါင်းများစွာတောင် စောင့်ရပါသတဲ့….
သင်ဟာနတ်ကွန်းမှာဆုတောင်းပြီးရင်တော့ O-mikuji လို့ခေါ်တဲ့ ကံကြမ္မာကိုရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ယန်း ၁၀၀ ရှိပါတယ်။ စာရွက်အပိုင်းတွေကို ကျပန်းစီတန်းထားပြီး သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့တစ်ခုက သင့်ကံကြမ္မာကိုပြောပြပေးမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
ဂျပန်မှာတော့ နှစ်သစ်ရဲ့ပထမဆုံးညမှာမက်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်ဟာ တစ်နည်းအားဖြင့်လာမည့်နှစ်အတွက် သင့်ရဲ့ကံကိုဟောကိန်းထုတ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ Jan. 1 ရက်နေ့ညမှာမက်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်ကို ဂျပန်လို(hatsuyume) လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ JAPO ပရိသတ်ကြီးရော hatsuyume ကိုမှတ်မိကြသေးလား?
ကံအကောင်းဆုံးလက္ခဏာတွေကတော့ (ဖူဂျီတောင်၊ သိမ်းငှက်နဲ့ ခရမ်းသီး/ပင်) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သီအိုရီအရ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့Mount Fujiဆိုရင်တော့ ကံတက်မယ်၊ သိမ်းငှက်ကတော့ တော်ပြီးသန်မာတယ်၊ ခရမ်းသီးကိုတော့ ဂျပန်လို nasu လို့ခေါ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ်အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ “ ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုရရှိမယ်” ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၉။ Kagami mochi
ဒီဇင်ဘာလဦးပိုင်းလောက်ကနေစပြီး စူပါမားကတ်တွေမှာ Kagami mochi ကိုစပြီးရောင်းနေကြပါပြီ။
အထူးအဆန်းလေးဖြစ်နေတဲ့ mochi cakes နှစ်ခုကိုဆင့်ပြီး အပေါ်မှာလိမ္မော်သီးလေးတင်ထားပါတယ်။ mochi cakes တွေရဲ့အောက်မှာတော့ အလှဆင်စာရွက်လေးခံထားပါတယ်.
Kagami mochi မှာလည်းရာဇဝင်များစွာရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး kami ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့စွမ်းအားတွေဟာ mochi ထဲမှာရှိနေတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။
ရုံးပိတ်ရက်ရာသီအတွင်းမှာတော့ store အများစုနဲ့ cafe တွေမှာ fukubukuro ၊ ဒါမှမဟုတ် lucky bag ကိုရောင်းချကြပါတယ်။ “happy bags” လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ kanji ကတော့ 福袋 လို့ရေးထားပါတယ်။
သို့သော်သတိထားရမှာက ကံကောင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း အဝယ်လွန်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဂျပန်ရဲ့နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်ကတော့ပြီးသွားပေမဲ့ … ဒီရုံးပိတ်ရက်အတွင်း ဂျပန်တွေဘာလုပ်တတ်သလဲဆိုတာ သိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်…
ကဲ..ဒါဆိုရင် စာဖတ်သူတို့လည်း ဒီအချက်လေးတွေထဲကဘယ်နှစ်ခုကို လုပ်ဖူးပြီးပြီလဲ?
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေကို ဂျပန်လူမျိုးဆန်စွာဖိတ်ခေါ်ကြည့်ကြရ‌အောင်နော်….
ပုံစံဟောင်းကြောင့် လူငယ်တွေပစ်ထားတဲ့ဂျပန်မုန့်ဟာ ဒီဇိုင်းအသစ်သို့ပြောင်းလဲပြီ !!
တရုတ်ရာသီခွင် “ နွား” နှစ်အတွင်း ဂျပန်တွင်မွေးဖွားခဲ့သူပေါင်း ၁၀.၆၆ သန်းခန့်ရှိ
ဂျပန်လူမျိုးတွေ နွေရာသီမှာဘာကြောင့် “ うな丼” (ငါးရှည့်ကင်ထမင်း) ကိုစားကြသလဲ ?
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နှစ်သစ်ကူး ရိုးရာယဥ်ကျေးမှု
2020 ခုနှစ်ရဲ့ “ ဆောင်းဦးလလယ် လပြည့်ည” ရဲ့အဓိပ္ပါယ် ? ၊ ဘာတွေလုပ်ကြသလဲ?
မြန်မာလူမျိုးပညာတော်သင်ကျောင်းသားနဲ့ ဂျပန်သူရဲမလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲ !!!
အားကျမိတဲ့ ​ဂျပန်​နိုင်​ငံရဲ့ သတင်း​လေးတစ်​ပုဒ်​
ရှေးရှေးတုန်းက ခြင်ကိုက်မခံရအောင် ကြက်တောင်ရိုက်ကစားကြတယ်တဲ့!
Cat Cafe လိုမျိုး Pig Cafe